Fampiharana programa ho an'ny Apple Watch miaraka amin'i Xamarin | Avy amin'ny mac aho
Na dia tsy diso fanantenana tamin'ny Keynote aza aho tamin'ity alatsinainy ity, dia tsy dia afa-po loatra aho tamin'izay heverin'izy ireo momba ny Apple Watch. Raha ny fahitako azy dia nandroso ny famoahana ny MacBook vaovao ho an'ny Keynote i Apple tamin'ny 9 martsa Satria tsy afaka nameno hetsika iray ianao tamin'ny fampisehoana ireo fiasa izay tokony nomanin'ny Apple Watch ho azy.
Samy nijery ny vaovao be dia be nomen'ny Apple Watch antsika rehetra isika, ankoatra ny daty namarotana azy io eto amin'ny firenentsika. Efa tao anaty tamba-jotra, herinandro talohan'ny hetsika, Apple dia nanasa mpamorona fampiharana ivelan'i Apple ho any amin'ny laboratoarany manokana mba hahavitan'ny fampiharana azy ireo amin'ity hetsika ity. Na izany aza, izay rehetra nanodidina ny Apple Watch dia tsy nisy atiny sy fientanam-po.
Izaho sy ianao, saingy nanantena zavatra bebe kokoa avy amin'ny Keynote farany aho. Tsy miresaka momba ny gaga amin'ny vokatra vaovao intsony aho fa kosa nilaza fa tokony hitory ilay iray izay mbola tsy namidiny. Miaraka amin'ny Apple Watch dia nametra ny tenany izy ireo tamin'ny famerenana ireo fiasa sasany, omeo ny angona angona bateria ary manaova fanamarihana somary mankaleo momba ny fampiharana.
Rehefa avy nanome ny hevitro momba ny hetsika aho dia mampahafantatra anao fa raha mpamorona rindranasa ianao na te-hanomboka eto amin'ity tontolo ity ka hampiasa Xamarín, nanome fanampiana izy hampivelatra ny rindranasa ho an'ity famantaranandro vaovao ity.
Nanambara i Xamarin fa manomboka manome fanampiana ho an'ireo mpamorona hamorona rindranasa ho an'ny Apple Watch. Raha sambany ianao maheno an'ity tontolon'ny programa ity, ny azonao atao hanombohana dia misintona Xcode 6.2. Avy eo dia tsy maintsy manavao ny Xamarin.iOS amin'ny kinova farany ianao, avy eo manavao ny Xamarin Studio na ny extension Xamarin ho an'ny Visual Studio ary avy eo miditra amin'ny menio fisie ary mamorona fampiharana ho an'ny Appel Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Fandaharam-potoana fampiharana ho an'ny Apple Watch miaraka amin'i Xamarin
Ny MacBook Air 13 "vaovao nanomboka ny taona 2015 dia misy ny fiara SSD-PCIe haingana dia haingana